पेटभित्र ड्रग्स लुकाएर २० दिन सम्म पनि दिसा गर्न नमानेपछि...
मुख्य पृष्ठरोचक रमाइलोपेटभित्र ड्रग्स लुकाएर २० दिन सम्म पनि दिसा गर्न नमानेपछि…
पेटभित्र ड्रग्स लुकाएर २० दिन सम्म पनि दिसा गर्न नमानेपछि…
आइतबार, २८ माघ, २०७४ 0प्रतिक्रिया
मानिसले कति दिन सम्म दिसा नगरीकनै बस्न सक्छ होला ? एक दिन, दुई दिन अथवा तीन दिन ? होइन्, एक जना मान्छेले २० दिन देखी दिसा गरेका छैनन् । दुई दिनमा दिसा नगर्दा त कति अप्ठेरो हुन्छ, तर २० दिन सम्म दिसा नगर्दा कस्तो होला ? कल्पना नै गर्न सकिन्न । बेलायतमा एकजना मानिसले भने २० दिनसम्म दिसा गरेका छैनन् ।
ती व्यक्तिले किन यति धेरै दिन सम्म दिसा गरेनन् त ? एउटा अनौठो कारण छ , त्यो हो, उनको पेटभित्र ड्रग्स छ । उनले दिसा गर्छन् र सो सँगै त्यो ड्रग्स बाहिर आउँछ भन्ने पुलिस आशमा बसेको छ । तर उनले दिसा नगर्ने अडान लिईरहेका छन् ।
उनी पुलिसको हिरासतमा छन् । उनले २० दिन देखी केही खाएका पनि छैनन् । पुलिसले दिएको खानेकुरा खान मानिरहेका छैनन् ।
उनलाई पुलिसले कडा निगरानीमा राखेको छ । एक दिन पक्कै दिशा गर्ने छन् र त्यो समात्ने छौँ भन्ने प्रहरीको आश छ । ती व्यक्तिको निरन्तर स्वास्थ्य परीक्षण पनि भैरहेको छ । तर तिनको नाम भने खुलाइएको छैन । बीबीसी